LibreOffice म्याथ उदाहरणहरू
LibreOffice म्याथ सूत्रहरू
तलका नमूना सूत्रहरू हुन् LibreOffice म्याथमा.
इन्डिसेस सँग सङ्केतहरू
तलका उदाहरणले कसरी प्रतीकहरू अनुक्रमणिकाहरूसँग निर्माण गर्ने भनेर बर्णन गर्दछ LibreOffice म्याथमा. तपाईँ यो उदाहरण प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरि र तपाईँको सूत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
अनुक्रमणिकाहरू सँग प्रतीकहरू निर्माण गर्न यहाँ अर्को उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा. तपाईँ यो उदाहरण प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ आदेश सञ्झ्यालमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर र तपाईँको आफ्नै सूत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
तेस्रो उदाहरण कसरी प्रयोग गर्ने LibreOffice म्याथ अनुक्रमणिकाहरू सँग प्रतीकहरू निर्माण गर्न जुन तल देखाइएको छ. क्लिपबोर्डमा तपाईँ उदाहरण प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नै सूत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् आदेश सञ्झ्यालहरूमा
म्याट्रिक्स कसरी निर्माण गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथ सँग. तपाईँको सूत्रमा उदाहरण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरि ।
म्याट्रिक्स सँग फन्ट साइजहरू परिवर्तन गर्न
अनुकूल फन्ट साइजहरू सँग यहाँ कसरी म्याट्रिक्स निर्माण गर्ने भन्ने उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा. तपाईँ यो उदाहरण प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर र यसलाई तपाईँको सूत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
गाढा फन्टमा म्याट्रिक्स
गाढा फन्ट म्याट्रिक्स कसरी निर्माण गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा. तपाईँ यो उदाहरण प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर र तपाईँको आफ्नै सूत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
प्रकार्यहरू कसरी निर्माण गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथ सँग. तपाईँको सूत्रमा यदि तपाईँ उदाहरण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस् आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर ।
वर्ग मूल कसरी निर्माण गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा. यदि तपाईँ उदाहरण तपाईँको सूत्रमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस् आदेश सञ्झ्यालहरूमा क्लिपबोर्ड प्रयोग गरेर ।
इन्ट्रिगल र योगफल दायराहरू, फन्ट साइज
सूत्रमा बिभिन्न फन्टहरू र फन्ट साइजहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा.
यो सेक्सनले सूत्रमा तपाईँ कसरी बिभिन्न विशेषताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर समावेश गरेको छ LibreOffice म्याथमा.
Title is: $[officename] म्याथ उदाहरणहरू